Shimbiraha careysan ayaa dagaallamaya, Rovio cusub oo xujo ah | Androidsis
Durba waa jiraan halkan mar kale ragga ka socda Rovio iyo markan oo leh a fikrad aad u soo noqnoqotay mana aha oo aan ahayn kii keenay Zoo Keeper DX ee Android. Mawduuc si fiican loo garaacay oo aan hadda mar kale la leenahay astaamaha saaxiibtinimada iyo xiisaha leh Shimbiraha shimbiraha. Xusuusnow, markii fikradahaagu kaa gaabiyeen, isticmaal nooc horeyba u soo noqnoqday si aad u siisid qallooca astaamahaaga.
Sababtoo ah tani waxay u egtahay sida Birds Birds Fight, xujo waali ah oo shaydaan sheydaan ah oo aan ku qasbeyno inaan isku darno fagaarayaasha kala duwan nidaam ahaan, tanina waa in la geliyo isla saddexda ama in ka badan oo ka mid ah astaamaha taxannadan caanka ah. Ciyaar aad u fudud oo leh astaamo aad u weyn oo aad u walwalsan tahay, maaddaama daqiiqad gacan ah la tirin doono si waqtigaas aad isugu daydo inaad xalliso heerka. Marka hadaad rabto inaad waqti fiican hesho, qoslo oo yara waasho, haka daahin isku dayga Shimbiraha Xanaaqsan. Aan aragno waxa ku saabsan si faahfaahsan.
1 Isku darka shimbiraha yar yar
4 Degso App
Isku darka shimbiraha yar yar
Mana ahan inaan wax ku tuuri karno wajiga Rovio Isticmaalka astaamahooda saaxiibtinimo marar badan, waa inaan aragnaa kuwa Warner ama Walt Disney sidii ay u soo bandhigeen dagaalka, waxa kaliya ee aan jeclaan lahayn inay isku dayaan inay soo bandhigaan wax run ah, tan iyo markii ay ku jireen, naftooda, Waxay horeyba u bixiyeen tayo badan, marka asal ahaan qaarkood way ku jabi lahaayeen.
Dib ugu noqoshada Dagaalkii Shimbiraha Xanaaqsan, waxay ku xasuusin doontaa wax badan oo Zookeeper DX ah, Ciyaar madadaalo ah oo isku dhafan tirooyin kala duwan, halkan xayawaanno kala duwan, oo aan heerar kala geddisan ku mari karno, iyada oo aan la seegin ballanta, tirinta na siineysa inaan u soconno sida dadka indhoolayaasha ah oo raadinaya tirada ku faraxsan inay fuliyaan isku darka saddex.
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaal Waa isku mid laakiin u beddelashada xayawaanka xaywaanada xayawaanka Angry Birds, sidaas darteed iyada oo codka caanka ah ee loo yaqaan 'Rovio soundtrack' oo lagu daray taabashada halkaas iyo halkaa waxaan horeyba u haysannay ciyaar fiidiyow ah oo cusub oo mashquulsan saacadaha nasashada.
Dabcan way u qalantaa. Waa jinsi la shiiday, laakiin jilayaashiisa la midka ah waxay yareeyaan xanuunkaas asal la'aanta ah. Haddii tan aan ku darno tayo farsamo oo weyn oo leh shaxanka qaarkood iyo is-dhexgal ku habboon waxa guud ahaan yahay, waxaan u galnaa inaan ka qayb-galno ciyaar fiidiyoow ah oo la oggol yahay in la ciyaaro taasna hubaal in badan oo ka mid ah is-beddelka ugu horreeya lagu kicin doono.
Iyo sida tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aan ciyaar u ciyaarnoSi wanaagsan baad uga soo qaadatay Rovio inuu noo keeno Dagaalkan Shimbiraha Xanaaqsan. Marka waxaan wajaheynaa ciyaar fiidiyoow ah oo sharad ku sameyneysa xawaaraha iyo jahwareerka mid kasta oo ka mid ah ciyaarteeda oo leh 30 sekan si looga gudbo heer taasna hubaal waxay ku siin doontaa xoogaa saacado wanaagsan oo baashaal ah ka hor xagaagan xagaagan dhici doona. Waxaad horeyba u ogtahay in saacadahaas kadib barkada, halka ilma adeeradaada ay seexanayaan, waxaa xiiso leh in ciyaar fiidiyow ah lagusameeyo taleefankaaga casriga ah sida kan.
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaal
Baashaal iyo deg deg
Tayo farsamo oo weyn
Jinsi aad u burbursan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Shimbiraha Xanaaqsan Dagaalku wuxuu u yimid inuu waqti fiican la qaato xujo sheydaan